Manakaiky ny fety: be mpamandrika ny ankoho gasy sy ny vorona… | NewsMada
Manakaiky ny fety: be mpamandrika ny ankoho gasy sy ny vorona…
Na eo aza ny fiomanana amin’ny fifidianana, mikarakara ny fanamarihana ny fety roa sosona koa ny isan-tokantrano. Samy manao izay mety arakaraka ny vola eo an-tanana…
10 andro katroka tsy hahatongavan’ny fetin’ny Krismasy isika izao. Efa be mpamandrika hatrany amin’ny mpiompy ireo akoho gasy vantombantony sy ny vorona gasy toy ny gana sy ny sarindokotra, ny dokotra, ny gisa, ny vorontsiloza…
Anisan’ireo mpamandrika izany ireo mpikarakara lanonana amin’ny fetin’ny Krismasy fa eo indrindra koa ireo manomana ny fetin’ny faran’ny taona. Ankoatra izany ireo fikambanana sy minisitera efa manomana sahady ny fifampiarahabana tratry ny taona mandritra ny volana janoary hatrany amin’ny volana marsa.
Mandeha, araka izany, ny “bizina” akoho gasy sy vorona gasy, tena nompiana amin’ireo karazan-tsakafo tsy misy akora simika. Mihinana katsaka sy ampombo…. Tsy be mpitady loatra kosa ny akoho fakana nofo na efa nisy aza ny fanazavana nataon’ny tompon’andraikitra fa tsy mankarary ny fihinanana azy ireny.
Manodidina ny 10 000 Ar hatramin’ny 15 000 Ar ny vantotr’akoho gasy iray raha ny eny an-tsena. Tafakatra hatrany amin’ny 25 000 Ar anefa izany ho an’ny akoholahy sy ny reniakoho vaventy.
15 000 Ar hatramin’ny 30 000 Ar ny gana, arakaraka ny habeny. Toraka izany ny sarindokotra. Ny gisa, manodidina ny 50 000 Ar ny kelikely ary 80 000 Ar ny vaventy.
Ho an’ny vorontsiloza, tsy misy latsaky ny 60 000 Ar ny salantsalany. Tafakatra any amin’ny 140 000 Ar ny vaventy ampy ho an’ny olona maro an-trano.
Tsy mbola betsaka ireo mividy akoho amam-borona raha ny eny an-tsena, raha ny filazan’ireo mpivarotra. Miandry akaiky fety mihitsy ny olona vao mividy azy ireny. Tsy manana tokotany hahafahana miompy azy mandra-pahatonga ny fety ny mponin’Antananarivo ka miandry roa na iray andro alohan’ny fety mihitsy vao mividy, matetika. Misarika mpangalatra ihany koa ny fisian’ny ankoho amam-borona ao an-tanàna ka izany ny antony tsy hividianan’ny olona azy ireo aloha.